China Perforated mundiro sintered mesh dhayeti bhasiketi Kugadzira uye Fekiti | Zhengyuan
Yasina Stain Wire Mesh inogona kushandiswa kushongedza, cage ventilation, antiskid. Pnguva imwechete, inogona kuita sekuchengetedza kwekupisa kwepakati, michina yemhepo yekuisa, mhando dzakasiyana dze chassis nemishini. Kumwe kushandiswa kwakakosha kusefera. Semuenzaniso, firita, firita pombi, mvura uye gasi kurapa nhumbi.
Inoshandiswa polyester, kurapwa kwemvura, mafuta, mishonga, chinwiwa, kemikari, makemikari fiber zvigadzirwa kusefa uye nekupisa kwemhepo kufefetera.
1. Iwe uri fekitari / mugadziri kana mutengesi?
Isu tiri fekitiri yakananga ine varidzi vemitambo yekugadzira uye vashandi. Zvese zvinhu zvinoshanduka uye hapana chikonzero chekunetseka nezvekuwedzerwa kwekubhadharwa nemurume wepakati kana mutengesi.
2. Ndeapi nyika aunotumira kune?
Zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kutumirwa kuAustralia, Canada, UK, USA, Germany, Thailand, South Korea uye zvichingodaro.
3. Ndinogona kuwana mahara samples?
Kana sampuro iripo, hongu, inogona kuva yemahara. Kana zvisingaonekwe, chinja tsika.
4. Ndeipi yako yekuresa zvishoma huwandu?
Chaizvoizvo hapana MOQ yezvigadzirwa zvedu. Asi kazhinji tinokurudzira huwandu hwakavakirwa pamutengo iri nyore kugamuchira.
5. Ndeipi nzira yekubhadhara yaunogona kugamuchira?
Kazhinji tinotora T / T, LC, Western Union, PayPal, Escrow neMari Gram.
Yepfuura: Metal poda sintered firita
Inotevera: Tumira ballast mvura yekuseta cartridge